Inkcazo: I-Hypothetical Proposition
Isiphakamiso esicetywayo sisitatimende somqathango esithatha ifom: ukuba P ke ngoko Q. Imizekelo iya kubandakanya:
Ukuba wafunda, wafumana ibakala elungileyo.
Ukuba sasingadli, ngoko siza kulamba.
Ukuba wayenxibe ingubo yakhe, akayi kubanda.
Kuzo zonke izitatimende ezintathu, inxalenye yokuqala (Ukuba ...) ibhalwe i-antecedent kunye nenxalenye yesibini (ke ...) ibhalwe ngokulandelelana. Ngeemeko ezinjalo, kukho izibini ezibini ezichanekileyo ezinokuthi zitsalwe kwaye ezimbini zingenakulungelelaniswa ezinokuthi zithathwe-kodwa kuphela xa sicinga ukuba ulwalamano oluchazwe kwisiphakamiso sokucinga luyinyaniso .
Ukuba ulwalamano aluyinyaniso, ke akukho ziphazamiso ezivumelekileyo.
Ingxelo yokucinga ingachazwa yile tafile ye nyaniso:
P Q Ukuba P ke Q
Ukucinga ukuba inyaniso yesiphakamiso esicatshulwayo, kunokwenzeka ukuba udwebe amabini asemthethweni kunye namabini angabikhoyo:
I-inference yokuqala evumelekileyo ibizwa ngokuba kukuqinisekisa ukuchasene , okubandakanya ukwenza ingxabano efanelekileyo yokuba ngenxa yokuba inyaniso iyona nto, ngoko ke oku kulandelwayo kuyinyaniso. Ngaloo ndlela: kuba kuyinyani ukuba wayembethe ingubo yakhe, ngoko kunjalo inyaniso ukuba akayi kubanda. Igama lesiLatin kule nto, i- modus ponens , isetyenziswa rhoqo.
Inqaku lesibini elisebenzayo libizwa ngokuba likhanyela umphumo , olubandakanya ukwenza ingxoxo echanekileyo yokuba ngenxa yoko yinyani, ke into echasene nayo iyamanga. Ngaloo ndlela: ubanda, ngoko akazange afake ingubo yakhe. Igama lesiLatini kule ndlela, i- modus tollens , isetyenziswa rhoqo.
Inqaku lokuqala lokungavumelekanga libizwa ngokuba liqinisekisa ukulandelelana, okubandakanya ukwenza ingxabano engavumelekanga ukuba ngenxa yoko yinyani, oko kufuneke kube yinyaniso.
Ngaloo ndlela: akabanda, ngoko ke kufuneka ukuba agqoke ingubo yakhe. Ngamanye amaxesha kuthethwa ngokuba yi-fallacy yeziphumo.
Inqaku lesibini elingavumelekanga libizwa ngokuba likhanyela ukuchasana , okubandakanya ukwenza ingxabano engavumelekanga ngenxa yokuba into echasene nayo ingamanga, ngoko ke umphumo kufuneka ube buxoki.
Ngaloo ndlela: akazange agqoke ingubo yakhe, ngoko ke kufuneka abe kubanda. Ngamanye amaxesha kuthethwa ngokuba yi-fallacy ye-antecedent kwaye ine fom elandelayo:
Ukuba uP, ngoko-Q.
Umzekelo ochanekileyo wale nto uza kuba:
Ukuba uRoger unguDemokhrasi, ngoko ke unenkululeko. URoger akayena uMdemokhrasi, ngoko ke akafanele akhululeke.
Ngenxa yokuba le nto iphosa ngokusemthethweni, nantoni na ebhalwe ngolu hlobo izakuphosakela, kungakhathaliseki ukuba yimaphi amagama oyisebenzisa ukubeka iP and Q.
Ukuqonda indlela kunye nokuba kutheni oku kungabikho okungafunekiyo kwezi zimbini ezingenakwenzeka kungancedwa ngokuqonda umahluko phakathi kweemeko eziyimfuneko kunye neleyo . Unokufunda kwakhona imigaqo yokuchazwa ukufunda ngaphezulu.
Kwaziwa kwakhona ngokuba: akukho
Ezinye iipellings: akukho
Iimpazamo eziqhelekileyo: akukho
Kutheni Ungakholelwa KuThixo?
Iyintoni Isigubungelo seGamer? Ukuphindaphinda ukunyamezela
Ingqwalaselo yoBuchule kunye neBhajethi yeSithili
Ndifanele ndibe nini na ipiyano yam?
Ingxabano Ngokulungiswa kobukhoboka eUnited States
Ngubani u-Ulysses (Odysseus) kwiHomer's Odyssey?
Indlela yokwenza ii-Pointe Shoes zexesha elide
Kutheni Kutheni Ubuncinane Ubunzima Bomdla PTSD?